I-USA kumele ikhethe phakathi ‘kosathane’ ababili - Bayede News
Home » I-USA kumele ikhethe phakathi ‘kosathane’ ababili
Omunye unamava kanti omunye uyimbulu enyathela ngamanyikwe amabili
NEMBALA kubukeka abavoti baseMelika bezalelwe yimalasi endlini njengoba esikhathini esingangenyanga nje kuzomele bakhethe ukuthi ngubani ozoba nguMemgameli nethikithi lakhe. Lona esimweni esejwayelekile ngumsebenzi olula nje ngoba uvotela lowo omthandayo. Nokho kumaMelikana akunjalo lesi akusona neze isimo esejwayelekile. Ucwaningo lwakamuva luveze ukuthi zombili izimbangi ezingenele esokuba nguMengameli abavoti kabazethembi ngezindlela ezahlukene. Kulowo ongase abe nguMengameli wokuqala wesifazane uNkk uClinton abavoti bathi selokhu kwavela udaba lwama-imeyili ayewathukusa, abasamethembi. Lokhu kwabanye kudalwa izinkulumo zokuthi kulama-imeyili kuvela nobufakazi bokuthi ubengumagaya azidlele esebenzisa isikhundla sakhe ukuze kuzuze isiKhwama iClinton Foundation eholwa ngumnyeni wakhe uMnu uBill Clinton. Uyanukwa futhi ngokuba sephaketheni lomacaphuna kusale baseMelika kanye nakwamanye amazwe nokusatshelwa ukuthi lokho kungenza abe ‘nesikweletu’ ayohlale njalo esikhokha kubo njengoba nabo bemxhasa nje.
Kanti ngakolunye uhlangothi imbangi yakhe uMnu uDonald Trump musha kwezombusazwe uyinjinga nje kanti waziwa kakhulu nasemkhakheni wethelevishini. Yize kunjalo kubavoti kukhona abashaya amakhala kusuka ekungabini nesipiliyoni kwakhe udaba lokucwasa abantu ngobuzwe kanye nenkolo njengoba ake asho iziga nje zokuthi kuyomele kube nodonga olwehlukanisa abaseMelika kanye neMexico kuvinjwa labo abangena eMelika ngokungemthetho.
Uyasolwa futhi ngokungabahloniphi abantu besifazane. Kepha okuhlala kabana wukuthi akakhulumi iqiniso ngezimali zakhe kanjalo nokukhokhela kwakhe intela.
Okunye okuvelayo yize kwabanye kuyingxenye nje yokunyundelana kosopolitiki kuvela ukuthi lo mholi uyazifela ngoMengameli waseRussia, uMnu uVladimir Putin nokuyinto elicala kwabanye eMelika njengoba iRussia noPutin begxekwa phakathi kokunye ngokuxhasa uHulumeni waseSyria kanye nokuhlasela ezokuxhumana eMelika.
Izwe nesizwe kwehlukene phakathi
Okusobala wukuthi noma ngabe ngubani ophumelelayo okhethweni oluzayo wukuthi uzobe ehlalelwe ngumsebenzi onzima wokuqala phansi abumbe leli lizwe nesizwe esekuvele kwehlukene phakathi. Umholi omusha kuyomele aqale alungise ubudlelwane phakathi kwezinhlanga njengoba aboHlanga kuleliya lizwe belibeka ngembaba elokuthi kabaziboni beyingxenye yezwe njengoba impilo yabo ithathwa njengengabalulekile. Lokhu sekudale umkhankaso owaziwa ngeleBlack Lives Matter ube kuzwelonke nokudala ukubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwezakhamuzi zaboHlanga kanye namaphoyisa abathi ayabacwasa. Kanti nobudlelwane phakathi kwabenkolo yobuKhrestu kanye neyobuSulumane nakho akukuhle njengoba ukuhlaselwa kwangaphakathi kunukwa abantu abankolo yabo kuwubuSulumane. Kanti nxa kufikwa kupolitiki yamazwe ngamazwe iMelika ingaphansi kwengcindezi emangalisayo njengoba uMengameli u-Obama kwezinye zezinto azethembisa eseshaya ungqimphothwe.
Odabeni nje lwase-Iraq i-USA imi kabi ngoba kukhona izinkulumo zokuthi umholi olandelayo kuyomele abuyekeze ukungazibandakanyi kwe-USA e-Iraq ikakhulukazi njengoba ibutho le-ISS selenza umathanda kulesiya sifunda. NolwaseSyria liyihlazo njengoba i-USA imiswe kabi iRussia. Kanti nobudlelwane bezwe i-Isreal ne-USA nalo lishisa ibunzi ngoba kunomuzwa ikakhulukazi kwabakwa-Israel wokuthi u-Obama wabashiya okhalweni ngesikhathi eba nesivumelwane ne-Iran.